About isu - Bruicojewelry Accessories Co., Ltd
Bruico Jewelry rinopa nyanzvi zvishongo customization, magadzirirwo, kudhinda uye kubudiswa mabasa, kunyanya tichifunga 14K uye 18K waMosesi mabhizimisi. Bruico Jewelry yakatangwa 2015 uye anopindura nzvimbo 500 mativi metres, ine pachake fekitari yacho, kudhinda michina, pakuonekwa michina, CNC michina uye dzemagetsi michina.
We anopa nyanzvi zvishongo magadzirirwo uye kugadzirwa mabasa. Takaita kubudirira zvikuru uye akasimbisa nyanzvi chikwata panyaya rokutenga, Sales, arun, mari uye kumusika. Pari kambani yedu ine vashandi 50, 3 vagadziri uye 2 mufanidzo wevanamakanika. chikwata chedu vaduku uye akasimba, pamwe nakisisa Artisan nemidzimu uye nemasango mufashoni pfungwa. Tinogona kupindura mutengi racho mumaawa 48.
Tine vafumi zvakaitika zvishongo zvakagadzirwa uye kugadzirwa. High unhu unovimbisa uye anovimbwa. zvigadzirwa edu vane zvakawanda kushandiswa, akadai kupemberera pakati intimates, chipo kusimudzirwa, zvipo zviitiko zvikuru. Zvinorayirwa vari kunyanya kubva niche zvishongo muzvitoro, freelance vagadziri uye boutiques.